Perché era importante la tribù di Beniamino nella Bibbia? | PREGHIERA&NEWS
Gịnị mere agbụrụ Benjamin ji dị mkpa na Baịbụl?
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 10, 2020 Septemba 10, 2020
E jiri ya tụnyere ụfọdụ nke ebo iri na abụọ ndị ọzọ nke Israel na ụmụ ha, ebo Benjamin enweghị nnukwu akwụkwọ akụkọ Akwụkwọ Nsọ. Agbanyeghị, ọtụtụ ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke Akwụkwọ Nsọ sitere na agbụrụ a.
Benjamin, nwa nwoke ikpeazụ nke Jekọb, otu n’ime ndị nna ochie nke Israel, bụ onye Jekọb hụrụ n’anya karịa nne ya. Maka ndị anyị maara akụkọ Jenesis banyere Jekọb na ndị nwunye ya abụọ (na ndị iko nwanyị), anyị maara na Jekọb họọrọ Rechel karịa Lia, na ọ pụtara na ọ nwere mmasị karịa ụmụ Rechel karịa Lia. (Jenesis 29).
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na Benjamin nwetara ọrụ dị ka otu n'ime ụmụ ndị Jekọb kacha hụ n'anya, o nwetara amụma dị ịtụnanya banyere ụmụ ya na ngwụcha ndụ Jekọb. Jekọb gọziri nke ọ bụla n’ime ụmụ ya ma buo amụma banyere ebo ha ga-abịa n’ọdịnihu. Nke a bụ ihe Benjamin natara:
“Bẹnjaminu bẹ a-bụru okfu anụ Nchileke; n'ututu ka o n devripia ihe ọ dọb ,uru, n'anyasi o n dividkesa ihe nkwata "(Jenesis 49:27).
Site na ihe anyị maara banyere agwa Benjamin site na akụkọ a, nke a yiri ihe ịtụnanya. N’isiokwu a, anyị ga-amata ụdị onye Benjamin bụ, amụma ahụ pụtara ebo Benjamin, ndị a ma ama n’ebo Benjamin, na ihe ihe ebo ahụ pụtara bụ.
Wasnye bụ Benjamin?
Dị ka anyị kwuru na mbụ, Benjamin bụ ọdụdụ nwa Jekọb, otu n’ime ụmụ ndị ikom Rechel. Anyị enwetaghị ọtụtụ nkọwa banyere Benjamin site na akụkọ Akwụkwọ Nsọ, n'ihi na ọkara nke ikpeazụ nke Jenesis metụtara ndụ Jekọb.
Otú ọ dị, anyị maara na ọ dị ka Jekọb adịghị amụta ihe site na ndudue ya nke iso Jekọb nwee mmasị, n'ihi na ọ na-eme ya na Benjamin. Mgbe ụmụnne ya na-amataghị Josef, nwalere ha site n’ịyi egwu ime ka Benjamin bụrụ ohu maka “izu ohi” ya (Jenesis 44), ụmụnne ya rịọrọ ya ka onye ọzọ were ọnọdụ Benjamin.
Ewezuga ụzọ ndị mmadụ si emeghachi omume na Benjamin na Akwụkwọ Nsọ, anyị enweghị ọtụtụ njirimara maka agwa ya.
Gịnị ka amụma Benjamin pụtara?
Amụma Benjamin yiri ka e kewara ya ụzọ atọ. Akwụkwọ Nsọ ji ebo ya tụnyere nkịta ọhịa. N’ụtụtụ, ọ na-eripịa anụ oriri, n’anyasị kwa, ọ na-eke ihe ọ kwatara.
Anụ ọhịa wolf, dị ka nkọwa John Gill gosiri, gosipụtara ikike agha. Nke a pụtara na ebo a ga-enwe ihe ịga nke ọma n’agha (Ndị Ikpe 20: 15-25), nke ezi uche dị na ya n’iburu amụma ndị ọzọ agha mgbe ha na-ekwu maka ịkwakọrọ ihe na ịkwakọrọ ihe.
Ọzọkwa, dị ka e kwuru na nkọwa dị n'elu, nke a na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ otu n'ime ndị Benjamin a ma ama: Pọl onyeozi (karịa ya n'otu oge). Paul, ke “usenubọk” uwem esie, ama adia mme Christian, edi ke utịt uwem esie, enye ama okop inemesịt mbụme emi enye akakade ye eke nsinsi uwem.
nwoke silhouette na ugwu mgbe anyanwụ dara na-agụ akwụkwọ nsọ
Olee ndị bụ ndị dị mkpa n’ebo Benjamin?
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ebo Livaị, ndị ebo Benjamin mepụtara ọtụtụ ndị edemede dị mkpa n’ime Akwụkwọ Nsọ. Anyị ga-eme ka ụfọdụ n'ime ha pụta ìhè n'okpuru.
Ihud bụ onye ọchịchịrị ikpe nke jọgburu onwe ya n’akụkọ ihe mere eme nke Israel. Ọ bụ onye aka ekpe nke meriri eze Moab wee kpọpụta Israel n’aka ndị iro ya (Ndị Ikpe 3). Ọzọkwa, n'okpuru ndị ikpe Izrel dị ka Debora, ndị Benjamin nwere ihe ịga nke ọma dị ukwuu n'agha, dị ka e buru n'amụma.
Onye nke abụọ, Sọl, eze mbụ nke Israel, hụkwara ọtụtụ mmeri nke ndị agha. Na ngwụcha nke ndụ ya, n’ihi na ọ gbakụtara Chineke azụ, ọ masịghị ihe nlịgha nke ije Ndị Kraịst. Mana na mbido, mgbe ọ bịaruru nso nso nke Onye-nwe-anyị, ọ na-edugakarị Israel gaa n'akụkụ mmeri nke ọtụtụ mmeri ndị-agha (1 Samuel 11–20)
Onye nke atọ anyị nwere ike bụrụ ihe ijuanya nye ndị na-agụ akwụkwọ, ebe ọ bụ na ọ sonyeghị n'agha ahụ. Kama nke ahụ, ọ lụrụ agha ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agbachi nkịtị iji zọpụta ndị ya.
N’ezie, Eze Nwanyị Esta sitere n’agbụrụ Benjamin. O nyeere aka mebie nkata a ga-ebibi ndị Juu mgbe o merisịrị obi Eze Ahasuerus.
Ihe atụ anyị kachasị ọhụrụ site n'ebo Benjamin sitere na Agba Ọhụrụ na, nwa oge, na-ekerekwa aha Sọl. Pọl onyeozi sitere na agbụrụ Benjamin (Ndị Filipaị 3: 4-8). Dị ka anyị tụlere na mbụ, ọ na-achọ iripịa anụ oriri ya: Ndị Kraịst. Mana mgbe ọ nwesịrị ike mgbanwe nke nzọpụta, ọ gbanwere ọgbụgba ndụ na ahụmịhe nke akwakọrọ ngwongwo na njedebe nke ndụ ya.
Gịnị bụ ihe ebo Benjamin pụtara?
Agbụrụ Benjamin dị ọtụtụ maka ọtụtụ ihe.
Nke mbu, ike agha na mmegide anaghị apụtakarị ihe ga - abara agbụrụ gị uru. Ndị Benjamin a kasị mara amara n'Akwụkwọ Nsọ, dinara otu iko Livaị n'ike ma gbuo ya. Nke a mere ka ebo iri na otu jikọọ aka megide ebo Benjamin wee mee ka ha daa mbà nke ukwuu.
Mgbe mmadụ lere Benjamin anya, ọ bụ agbụrụ kasị nta n’Izrel, o nwere ike ọ hụghị ike ịlụ ọgụ. Ma dị ka a tụlere n'isiokwu a bụ Got Ajụjụ, Chineke nwere ike ịhụ karịa ihe mmadụ nwere ike ịhụ.
Nke abuo, anyi nwere otutu ndi di nkpa sitere na ebo a. Onye ọ bụla ma e wezụga Pọl gosipụtara ike agha, aghụghọ (n'ihe banyere Esta na Ehud) na ọgụgụ isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Anyị ga-arịba ama na mmadụ anọ ahụ a kpọtụrụ aha nọ n'ọkwá dị elu n'ụdị ụfọdụ.
Paul ama ọkpọn̄ idaha esie ke nditiene Christ. Mana dịka a pụrụ ịrụ ụka, Ndị Kraịst na-anata ọkwá dị elu dị elu ka ha na-esi ụwa a kwaga na nke ọzọ (2 Timoti 2:12).
Onyeozi a si n'inwe ike nke ụwa gaa n'ọkwá dị elu nke ọ ga-ahụ mgbe ọ ga-emezu n'eluigwe.
N'ikpeazụ, ọ dị mkpa na anyị lekwasịrị anya n'akụkụ ikpeazụ nke amụma Benjamin. Paul ama enem emi ke ini enye ekedide Christian. Na Mkpughe 7: 8, o kwuru banyere mmadụ iri na abụọ nke ebo Benjamin na-anata akara site na Mmụọ Nsọ. Ndị nwere akara a na-ezere mmetụta nke ihe otiti na ikpe ikpe ndị egosiri n'isiakwụkwọ ndị na-esote.
Nke a putara na ndi Benjamin enwetabeghi nani ihe agha n’obodo, ma ha nwekwara ike inweta ngozi nke ndu ebighebi. Amụma Benjamin abụghị naanị na ọ gafere Agba Ochie na Agba Ọhụrụ, mana ọ ga-abịa na mmezu ikpeazụ na njedebe oge.
Nke gara aga Post Gara aga post:Kansụl nke taa 10 Septemba 2020 nke San Massimo onye nkwupụta
Next Post → Post ozo:Ndị seminarị America batara ọhụrụ na-ezute Pope Francis ka ewepụrụ iche